Barcelona oo waayi karta goolhaye Claudio Bravo inta ka harsan xilli ciyaareedka – Gool FM
(Catalonia) 01 Maajo 2016. Goolhayaha Barcelona Claudio Bravo ayaa garoomada ka maqnaan kara inta ka harsan xilli ciyaareedka iyadoo loo eegayo inuu afar kulan maqnaa kaddib isla dhaawacan kubka ah oo gaaray bishii September.
Goolhayaha reer Chile ayaa la arkaa inuu seego kulanka axada ee Derby-ga Espanyol, kulanka hore ee labada kulan ee Barca uga harsan La Liga xilli ciyaareedkan.
Wuxuu la dhibtoonayay xanuun muruqa ah ee lugta midig ciyaartii xalay ay ka adkaadeen kooxda Real Betis iyadoo lagu badelay Marc-Andre ter Stegen.
Tijaabooyin la marsiiyay ayaa lagu sheegay in gool ilaaliyaha uu ka dhaawacan yahay kubka lugta midig laakiin kooxdu ma ay caddeyn inta uu garoomada ka maqnaan doono, waxaase la sheegay in soo kabsashadiisa ay go’aamin doonto haddii uu kulamada xiga la heli karo iyo inkale.
SERIE A: Juventus oo la joojin la’ yahay, AC Milan oo barbaro la dhaafi waysay Frosinone iyo kulamadii kale